I-Eagle Bay House - Igumbi Lasentwasahlobo - I-Airbnb
I-Eagle Bay House - Igumbi Lasentwasahlobo
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Olida
U-Olida Ungumbungazi ovelele
Ibekwe endaweni enhle ye-Eagle Bay phakathi kwehlathi lase-Jarrah nelase-Marri yile ndlela yokubalekela enokubukeka kuyo yonke indawo ethekwini. Buka ukuphuma kwelanga okuhle ukuze uqale usuku lwakho, konke kusukela ekunethezekeni kombhede wakho webanga lehhotela. Ukufakwa kwekhwalithi kuyo yonke indawo enegumbi lokugezela elinothayela elilingana nenkosi elizimele. Igumbi elijwayelekile lokuhlala nokubuka i-TV. Ake ubheke ihlane elingamahektha ayi-5, uzizwe sengathi uqhele ngamamayela ayisigidi sonke isikhathi amabhishi ase-Eagle Bay azokubizela ukuthi udiphu uhambo olude nje.
I-Dunsborough ingama-5mins nje emgwaqeni kanye ne-Wise Wineries ethandekayo, i-Lot 80 kanye ne-Eagle Bay Brewery konke ngaphakathi kwedrayivu emfishane ukuze uthole ukudla okumnandi kanye / noma ukuzitika kwamanye amawayini amahle anikezwayo. Ibhulakufesi nje elilula elithi "Up and at em" lihlinzekwa elihlanganisa okusanhlamvu, okothosiwe, itiye nekhofi ukukusiza ukuthi uhambe uyohlola ngaphandle.
Itholakala e-Eagle Bay ekugcineni kwe-Cape Naturaliste kunezinzuzo ezimangalisayo. Isimo sezulu siyalawulwa njengoba sizungezwe ulwandle ezinhlangothini ezintathu ngakho-ke kuvame ukufudumala kakhulu phakathi nezinyanga zasebusika futhi kuphole phakathi nezinyanga zasehlobo njalo kunomoya okupholisa ngaphansi kukavulandi onomthunzi. Nakuba ucwebezela ukukhanya kwelanga okuhle njalo kuyakhokha ukuvala nokuzivikela elangeni.
Izindawo ezihamba phambili phakathi kwendawo yase-Cape Naturaliste zihlanganisa i-Light House, i-Cape to Cape walk, i-Leeuwin-Naturaliste National Park, i-Whale spotting (kuvulandi wakho wangasese) noma ukubukisisa noma ukubhukuda emabhishi amangalisayo e-Eagle Bay, e-Point Piquet. , i-Meelup ne-Castle Rock. Amabhishi okuntweza entshonalanga yeKapa “Other Side of the Moon”, ‘Windmills” kanye vele “Three Bears”. Izindawo zokudlela zeWise Wineries, Lot 80 kanye ne-Eagle Bay Brewery nokunye okuningi. I-Mountain Biking ishaya eningizimu-ntshonalanga ngesiphepho futhi kukhona amathrekhi amaningana kanye nekhosi entsha emagqumeni aseduze ne-Cape Naturaliste Rd.
Sihlose ukusebenza ngokuthula nangokuyimfihlo sivumele isivakashi ukuthi sijabulele ukuhlala kwaso singaphazanyiswa. Sihlale sikujabulele ukubingelela nokuvalelisa futhi sitholakale ukuze sixoxe ngezindawo eziningi zezivakashi ongazivakashela.
Ngezinye izikhathi singase singabi khona futhi simise ikamelo ngalinye ukuze isivakashi sikwazi ukungena / sizihlole ngokwaso.
Sihlose ukusebenza ngokuthula nangokuyimfihlo sivumele isivakashi ukuthi sijabulele ukuhlala kwaso singaphazanyiswa. Sihlale sikujabulele ukubingelela nokuvalelisa futhi sitholakal…
UOlida Ungumbungazi ovelele